आँफु जहाँ जान्छन् त्यही लैजान्छन् निर्देशक दीपेन्द्रले नायिका सुरक्षालाई , कुरा के हो ? – Sandes Post
April 25, 2022 873
काठमाडौँ । पशुपतिप्रसाद, धनपति, आमा, चंगाचेट लगायतका गज्जबका फिल्म निर्देशन गरेर चर्चा कमाएका निर्देशक हुन् दीपेन्द्र के खनालले । सफल फिल्महरु दिइरहेका दीपेन्द्रमाथी भने एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यो हो दीपेन्द्र आँफु जहाँ जान्छन् त्यही सुरक्षालाई छुटाउँदैनन् । सुरक्षासँग ‘धनपति, आमा, चंगाचेट’ लगायतका फिल्ममा सहकार्य गरेका उनले फिल्म ‘के घर के डेरा’मा इन्ट्री पाए लगत्तै सुरक्षालाई पनि अटाउन भ्याईसके ।
यो फिल्ममा नायकद्धय दयाहाङ राई र विपिन कार्कीसँग नायिका वर्षा राउत मात्रै कलाकारका रुपमा थिए । तर दीपेन्द्र फिल्मको निर्देशकको रुपमा प्रवेश गरेसँगै सुरक्षा पन्तको पनि अभिनय रहने पक्का भएको छ । सुरक्षासहित फिल्मको टिम पूर्ण बनाएर दीपेन्द्र छायांकनमा जाने तयारीमा छन् । सुरुवातमा वर्षा मात्रै नायिका रहेको फिल्ममा दीपेन्द्रको प्रवेश भएपछि अहिले वर्षा र सुरक्षा २ नायिकाले काम गर्ने तयारी थालिएको छ ।
यो पनि : केकीले बोलाइनन् की बेनिशा आँफै गइनन् केकीको विबाहमा ? : सुन्दरी नायिकाहरु केकी अधिकारी, रीमा विश्वकर्मा र बेनिशा हमाल एकअर्कका मिल्ने साथी हुन् । सुखमा होस् वा दुखमा यी ३ सुन्दरीहरु एकैसाथ देखिन्थे । फिल्म ‘स्वर’बाट फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गरेका यी ३ सुन्दरीहरु अन्तरवार्तमा समेत बेला बेला एकसाथ आउँथे । फिल्मी क्षेत्रको संघर्ष, उतारचढावकाबिच रीमा र बेनिशा औषत चल्दा केकी बढी चलिन् । समयक्रमसँगै केकी अहिले पनि चलिरहँदा रिमा र बेनिशा भने खासै चल्न सकेनन् । बेनिशा त विस्तारै हराउँदै नै गइन् ।
तर, यी तिन नायिकाको मित्रतामा भने ब्रेक लागेन । प्रायः यी तिन नायिकाहरु एकसाथ देखिँदै आएका थिए । तर, नायिका अधिकारीको बिहेमा बेनिशा छुट्न पुगेकी छिन् । सुटुक्क गरिएको विबाहमा बेनिशा छुट्दा गर्दा रीमा विश्वकर्मा भने अटाएकी छिन् । केकी र रिमा कएकसाथ देखिँदा कहाँ गइन् बेनिशा ?
Prevपल शाहको पक्षमा पटक पटक बयान दिन पुगेका योगेशले खोले वास्तविकता ३ दिन प्रहरीबाट लुकेर बसे (भिडियो सहित)
Nextआज (सोमबार) झन् घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?